Doorashada Masar: Garyaqaan caan ah oo isaga haray tartanka doorashada Masar - BBC News Somali
Image caption Khaled Ali ayaa sheegay in xubno badan oo ka tirsan kooxdi u ololeyneysay in la xiray
Murashaxi xilka madaxtinimada Masar, garyaqaanka caanka ah ee dhanka xuquuqul insaanka Khalid Cali, ayaa noqonaya mas'uulkii ugu dambeeyay ee isaga hara tartanka doorashada madaxtinimada Masar, ee qabsoomi doonto 26 illaa 28 bisha Maarso.
Khalid ayaa ku sheegay sababtan uu uga harayo inay tahay in loo cagajugleeyay, hanaanka codbixinta dalkana uu yahay mid uu ku dheehan yahay musuqmaasuq.
Maalintii salaasada, madaxii hore ee milatariga Masar, Sami Canan ayaa xabisga loo taxaabay kaddib markii uu isku soo sharaxay xilka madaxtinimo.
Waxaana lagu eedeeyay inuu ku tuntay shuruucda milatariga uuna xilka madaxweyne isku soo sharaxay ogolaansho la'aan.
Madaxweyne Abdul Fatah al-Sisi, ayaa xilka madaxtinimada hayay tan iyo 2013, kaddib markii inqilaab milatari oo uu hoggaaminayay uu xilka uga tuuray hoggamiyihiii hore ee Masar Maxamed Mursi, ka hor intii uusan ku guuleysan doorashadii dhacday 2014-kii.
Madaxweyne Abdul Fatah al-Sisi, ayaa Maalintii Jimcaha markale waxa uu ku dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxtinimo ee afarta sano ee soo socota.
Garyaqaankaan Khalid Cali ayaa sheegay inuusan marnaba u tartami doonin tartanka doorashada madaxtinimo ee bisha Maarso.
Maxamed Anwar Sadat oo isna ahaa musharax u tartamayay doorashadan ayaa sheegay todobaadkii lasoo dhaafay inuu go'aansaday inuusan tartamin sababa la xiriira in jawiga uusan u suuragal ka dhigeynin doorashada xor ah inay dhacdo.